C8825D Root လုပ်မယ် - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Computer & Mobile Phone နည်းပညာ မျှဝေမှု
C8825D Root လုပ်မယ်
Aung Aung Swe
Huawei C8825D ကို Root လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Bootloader ကို အရင် Unlock လုပ်ရမှာပါ။
Bootloader ကို Unlock လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံး ဖုန်းရဲ့ Dial Pad မှာ ...
၁။ *#06# ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင် IMEI ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်... အဲဒါကိုမှတ်ထားပါ ..
၂။ *#*#1357946#*#* ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် Product ID ရပါမယ်... မှတ်ထားပါဦး ..
၃။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး Battery ဖြုတ်ပါ ။ Battery နောက်က S/N ကိုကြည့်ပြီးထပ်မှတ် ထားလိုက်ပါ။
စုံပြီဆိုရင်တော့ ဒီကိုသွားပါ ..
ရောက်သွားရင် Search ပုံစံ မှန်ဘီလူး လေးအောက်က scroll bar (ဒေါင်လိုက်ဘား) လေးကို အောက်ကုိုဆွဲချလိုက်ပါ .. အောက်ဆုံးကြောင်းက လေးထောင့်ကွက်လေး ကို အမှန်ခြစ်ပြီး .. အောက်က Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
၁။ Product Type ဘေးက Down Arrow ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး Smart Phone ကိုရွေးပါ။ ခဏစောင့်ပါ ..
၂။ အဲလိုပဲ Product Model ဘေးမှာ Huawei C8825D ကိုရွေးပါ။
၃။ Product S/N နေရာမှာ Battery အောက်ကကြည့်ထားတဲ့ S/N ကိုရိုက်ထည့်ပါ ..
၄။ Product IMEI နဲ့ Product ID နေရာမှာလည်း စောစောက မှတ်ထားတဲ့ ဂဏန်းတွေရိုက်ထည့်ပါ ...
၅။ ပြီးရင်တော့ အပေါ်ဆုံးက E-mail နေရာမှာ ကိုယ့် E-mail ကိုဖြည့်ပါ ...
အားလုံးပြီးသွားရင် အောက်ခြေက Submit Button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ...
၃ ရက်အတွင်း Mail ပြန်ပို့ ပါမယ်လို့ တော့ ရေးထားပါတယ် ။။။ ဒီ့ထက်မကလည်းကြာနိုင်ပါတယ် ။
Mail ပြန်ရပြီဆိုရင် တော့ huawei ကပို့ တဲ့ စာအောက်နားမှာ Password တွေလို ဂဏန်းတွေပြန်ပေးပါတယ် .. Bootloader Unlock Code ပါ ... ဒါတွေကို ဆက်မလုပ်ခင် သင့်ရဲ့ Contact တွေ.. message တွေ LOg တွေကှိုsoftware တစ်ခုခုသုံးပြီး back Up လုပ်ထားပါ ... အကုန်ပျက်မှာမို့ လို့ ပါ ...
ဒီနှစ်ခုကို ဆက်ဒေါင်းပါ ....
Fastboot.rar ကိုရလာပြီဆိုရင် Desktop ပေါ်မှာ folder ဖြစ်အောင် အရင်ဖြည်လိုက်ပါ ...
ပြီးရင် window + r ကို နှိပ်ပြီး run ထဲမှာ cmd လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ (fastboot folder ထဲမှာ shift ကို ဖိပြီး rightclick နှိပ် command prompt here ဆိုလည်းရပါတယ် ) .. command prompt ကျလာရင် cd desktop\_fastboot လို့ ရိုက်ပြီး enter နှိပ်ပါ ... ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပဲဝင်ဝင်ပါ .. fastboot folder ထဲကိုရောက်ရင်ပြီးရော
ဖုန်းထဲက setting ထဲက Fastboot ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီး .. power ပိတ်ပါ ..
ပြီးရင် Volume Down+ Power ကိုနှိပ်ပြီး fastboot Mode ထဲဝင်ပါ .. USB ကြိုးနဲ့ Computer ကို Join ပါ ..
... အိုကေ .. ဒီ command ကိုရိုက်ပါ ...
fastboot oem unlock **************** (ခရေပွင့်တွေနေရာမှာ Mail ထဲက ဂဏန်းတွေကိုရိုက်ပါ)
ဒါဆို Unlock ဖြစ်သွားပါပြီ ....
ပြီးရင် ဒေါင်းထားတဲ့ C8825D root ကိုထပ်ပြီး Desktop ပေါ်မှာဖြည်ပါ ...
Driver မသွင်းရသေးရင် ဖုန်းကို computer နဲ့ ထိုးပြီး Mobile Partnerထဲက Driver ကနေသွင်းလိုက်ပါ .. ပြီးရင် ဒီအတိုင်းလုပ်ပါ ...
၁။ ဖုန်း setting ထဲက security ထဲက unknown resource ကို အမှန်ခြစ်ပါ .. Developer ထဲက USB Debugging ကို On လိုက်ပါ ...
၂။ USB Join ပါ ... ၃။ c8825d_recovery_5030_v1.exe ကို run ပါ ... Enter နှိပ်ပါ ... Press any key ဆိုရင်ကြိုက်တာနှိပ်ပါ ... နှိပ်ရင်းနှိပ်ရင်း Box ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ Recovery Mod သွင်းပြီးသွားပါပြီ ...
ဖုန်း SD Card ထဲကိုဒေါင်းထားတဲ့ C8825D root ထဲက Update.zip ဆိုတာလေးကို Folder မဆောက်ပဲထည့်လိုက်ပါ ... ၄။ ဖုန်းကိုပြန်ပိတ်ပါ ..
၅။ Power + Volume Up ကိုနှိပ်ပြီး Recovery Mode ထဲဝင်ပါ ...
၆။ Update.zip ဆိုတာကိုရှာပြီး နှိပ်လိုက်ပါ ..
၇။ Reboot ပြန်ချလိုက်ရင် .. Rooted ဖြစ်သွားပါပြီ .... C8825D Root လုပ်မယ်
Reviewed by Aung Aung Swe
on 9:00:00 pm
Android Hard Reset/ Factory Reset
Android Lock crackers
Android Myanmar Font ထည့်နည်း
Android ROM Installation
Android Software များ
Android USB Driver များ
Android Version Upgrade
CDMA/GSM Internet setting
Funny Hacking Tutorials
G-Talk Password Hacking
GSM ဖုန်းများအတွက် WCDMA only Internet Mode
Hacking Android GalleryLock
Hard Disk အကြောင်း
HTC One X ကို Root လုပ်နည်း
Huawei c5900 Internet Setting
Huawei c8810 Hard Reset
Huawei Google Play install
Internet Password Hacking
Making Bootable USB
Message ပို့ လို့ မရရင်
MP3 သီချင်းမှာ Lyric ထည့်ခြင်း
My Android Game
My Android Softwares
Root မလိုသော မြန်မာ Font
Sony Xperia x8 ဖုန်းကို Root လုပ်နည်း
Useful Softwares Download
Window Logon Background Changer
Window Password Cracking
Window Script (bat)
Window Secret Technique
Window Secret Tutorials
Window Secrets Softwares
ပြန်ကြားရေး (reply ပြန်ပေးထားပါသည်)